Fisorohana valanaretina :: Voarara tsy mahazo mitondra olona avy any Shina ireo fiaramanidina • AoRaha
Fisorohana valanaretina Voarara tsy mahazo mitondra olona avy any Shina ireo fiaramanidina
Hentitra ny fanapahan-kevitra. Mba ho fisorohana ny fidiran’ny aretina “Coronavirus” eto Madagasikara, dia voarara tsy mahazo mitondra olona avy any Shina na olona sendra nandalo tao amin’ity firenena ity, ka miditra eto amintsika ireo fiaramanidin’ ny kaompaniam-pitaterana rehetra.
Tsy tokony hisy mpandeha avy any Shina miditra intsony aloha eto Madagasikara, ankoatra an’ireo nahazo alalana manokana avy amin’ny fitondram-panjakana.
Nisy ny naoty navoaka mikasika an’izany, efa nankatoavin’ny minisiteran’ny Fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro sy ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ary ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an’habakabaka eto Madagasikara (ACM).
“Voarara ho an’ny kaompanian’habakabaka rehetra miasa eto Madagasikara ny mitatitra olona avy Shina, na nandalo tao Shina tao anatin’ny efatra ambin’ny folo andro alohan’ny sidina. Mihatra ho an’ireo mpandeha avy any Macao, Taiwan sy Hong Kong io fanapahan-kevitra io. Hisy ny fahazoan-dalana manokana avy amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny ho an’ireo manana raharaha manokana. Ny fanjakana no mandray antanana ny fampitokana-monina azy. Raha mifanohitra amin’io tranga io dia tsy maintsy haverina ireo mpandeha ka ny kaompania nitondra azy no miantoka ny lany amin’izany”, araka ny loharanom-baovao avy ao amin’ny minisiteran’ny Fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro.
Nilaza ny Vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (OMS) fa mety hiparitaka haingana ity tsimok’aretina ity ao anatin’ ny andro vitsivitsy. Nanolokevitra ry zareo amin’ny fampiatoana ny fivezivezen’ ny olona raha ohatra ka marefo ny fahafahan’ny rafipahasalamana eto amintsika.
Fampiasana tany midadasika :: Voafehin’ny fepetra hentitra ireo vahiny manana tetikasa